Sidee loo noqon karaa khabiir suuq-gare ah oo ku-saleynaya internetka
Dunida casriga ah ee maanta waxay noqotay xitaa farshaxanno ka badan tan ka hor, sida qiyaasaha ugu caansan ayaa noo sheegaya in ka badan kala badh dadweynaha adduunku yihiin kuwo taagan oo isticmaalaya internetka maalin kasta. Hadda ka badan 3 bilyan oo internetka ah ayaa isticmaalaya wacyigelinta suuq-geynta sayniska oo waligood saameyn weyn ku leh nolosheena dhabta ah. Natiijo ahaan, qaybaha noocaas ah ee shaqaalaynta sida internetka khabiir ku ah suuq-geynta internetka, maamulaha iibka, cilmi-baarista internetka, CRM, ama khabiirada horumarinta waxsoosaarka ayaa si xoog leh looga dalbaday shirkadaha la xidhiidha warshadaha.
Ka hor intaanaan billaabin, mar kale soo calaamadee. Marka aynu dhigno khabiir suuq-galye ah oo online ah, inta badan waxaan ku samaynaynaa tixraac ku saabsan calaamada ama dhiirrigelinta alaabta ee warbaahinta dijital. Mashruucaan hore ee suuq-geynta ayaa la tacaalaya ololayaasha xayaysiinta internetka iyada oo loo marayo kanaalada dijital ah iyadoo lagu saleynayo habka ugu muhiimsan ee emailka iyo warbaahinta bulshada. Khabiir dhinaca suuq-geynta casriga ah ee casriga ah ayaa xoogga saaraya sidii loo dhisi lahaa awoodda magac magaciisu xooggan yahay, xoojinta wacyigelinta internetka ee macaamiisha ugu badan ee suuragalka ah si loogu badalo qaab beddelidda iibsadaha dhabta ah. Ciyaartoyda ugu fiican ee halkan ayaa durbadiiba loo isticmaalay in ay maalgashadaan ololeyaal suuq ah oo kala duwan sida cilmi-baaris weyn, suuq-geynta iyo wixii la mid ah. Hadafka koowaad ee ku dhowaad kasta oo ku takhasusay suuq-geynta internetka waa in lagu wado hawlgal ballaaran oo macaamil ah iyada oo loo marayo kororka taraafikada ama qiimaha raadinta.
Sidaas, sababta suuq geynta suuqa ayaa noqday mid aad u caan ah aduunka oo dhan? Iyo, Sidaa darteed, maxay tahay sababta takhasus u leh suuq-geynta online-ka hadda sidaas loo dalbaday kireysiga? Marka hore, suuq-geynta casriga ah ee casriga ah ayaa si sahlan u heli kara saxsanaanta la beegsanayo, inta badan awood u leh inay keenaan natiijooyin degdeg ah. Waa mid aad u raqiisan oo hubaal ah oo hufan oo ka soo horjeeda midka asalka ah. Xitaa faa'iidooyinka sida kor ku xusan waxay ku qanacsan yihiin, waa inaan qiraa. Sidaa daraadeed waa maxay xirfadaha ugu waxtarka badan ee lagu barto qof kasta oo ku takhasusay suuq-geynta internetka oo u dhaqaaqaya guusha xirfadeed?
Aan isku dayno inaan qaabeyno xirfad loo baahan yahay si loo noqdo musharaxa uqalma ee garoonka. Waxyaabahaasi waa in ay jiraan tiro aad u weyn oo ah koorasyo ​​kala duwan oo laga bixiyo internetka. Sidaa darteed, way adagtahay in la sameeyo faraqa saxda ah iyo bixinta wixii saxa ah oo talo ah. Si kastaba ha ahaatee, waxa aan u sheegi karo hubaal waa in khabiir kasta oo suuq-geynta onlineka ah uu leeyahay aqoon dheeri ah oo ku jira falanqaynta webka, wuxuu dareemayaa xaqiiqo ku saabsan eraybixinta aasaasiga ah ee suuq-geynta digital, inuu fahmo fikradaha muhimka ah ee daraasadda asaasiga ah, iyo sidoo kale beeraha guud iyo xeeladaha adag ee suuq geynta casriga ah.
Laakiin sida loo helo koorsada saxda ah si aad u noqotid qof aqoon u leh suuq geynta internetka uqalma? Waxaan rumeysanahay in koorsooyinkaasi ay tahay inay si buuxda oo dhamaystiran u buuxiyaan, hubiyaan inay daboolayaan ugu yaraan arrimahan soo socda marka la samaynayo xulashada saxda ah:
fikradaha muhiimka ah (Optimization Rate Search iyo Alternative Rate Rate, Media Media iyo Xeeladaha Suuq-geynta, Web Analytics, Istaraatiijiyada Suuq-geynta Emailka iyo Mobile, Suuq-raadinta Lacag-bixinta, iwm. )
Qalabyada ugu muhiimsan iyo qaab-dhismeedyada (Lacagta halkii Ads Ads, AdWords, Google Analytics, YouTube, Facebook, Twitter, iwm Source .)